URômulo Lucena, Umbhali ku- 1aviagemPlay
Izingobo Zokugcina Umbhali
Kungani iPrague ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuchitha i-Halloween? - I-Czech Republic
Siyazi ukuthi u-Okthoba 31 uthathwa njengeHallowen, noma i-Halloween, iholidi elingakabi ingxenye esemthethweni yekhalenda laseBrazil, kodwa eligujwa ezingxenyeni ezahlukahlukene zomhlaba. Lapha eBrazil sino-02 kuNovemba, iholide kanye nosuku lwabafileyo. Kepha kungani iCzech Republic…
Funda kabanzi Kungani iPrague ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuchitha i-Halloween? - I-Czech Republic
AmaMaya nama-Aztec asifundisani ngalolu bhubhane? - EMexico
AmaMaya nama-Aztec, ngisho nangemva kwamakhulu eminyaka, asasifundisa okuningi! Uma sibheka umlando omncane kakhulu singafunda futhi singaphindi amanye amaphutha. Wake wazibuza ukuthi kungani abaseYurophu babusa iMelika hhayi enye indlela ezungezile? Yebo, uma uphendula lo mbuzo ngokuthi kungenxa yokuthi…
Funda kabanzi AmaMaya nama-Aztec asifundisani ngalolu bhubhane? - EMexico
Kungani izwe laseSanta lipholile kangaka? - EFinland - Helsinki
Ngiyazi ukuthi kusasele okuncane ngaphambi kukaKhisimusi, kepha ngizwe sengathi ngibhala ngomhlaba kaSanta Claus futhi kungani ngingakhulumi ngohambo lwami lokuqala lapho? Ngakho-ke ake sikhulume kancane ngeFinnns, laba bantu abasebenza kahle nabasekelayo. Ngafika kanjani eFinland? Owami wokuqala…
Funda kabanzi Kungani izwe laseSanta lipholile kangaka? - EFinland - Helsinki
Kunjani ukundiza ngeQatar Airways, kanye nesikhumulo sezindiza i-Doha.
Kuhamba kanjani ngeQatar Airways? Uyalazi lelo thuba elivele empilweni yakho nelingeke liphindwe? Kunjalo, lolu bekuwuhambo lwami lokuqala neQatar Airways. Iskripthi besivele silungele i-Asia, kepha ngenxa yokuphoqelela amajeure akukwazanga ukuqedela i-aerial, okuyi…
Funda kabanzi Kunjani ukundiza ngeQatar Airways, kanye nesikhumulo sezindiza i-Doha.
I-Uruguay izwe elihlukile laseNingizimu Melika. - Montevideo
Ngisebenzise isikhathi samahhala kulokhu kuhlukaniswa, nginqume ukubona izithombe ngohambo oludala futhi… ngiqaphele ukuthi nginezinto eziningi zokuvuselela ibhulogi kunalokho engangikucabanga. Ngakho namhlanje ngizokhuluma kancane nge-Uruguay. Izwe elihluke kakhulu eNingizimu Melika, futhi ngani? Ngenxa yezinqubomgomo zabo zomphakathi. Ku…
Funda kabanzi I-Uruguay izwe elihlukile laseNingizimu Melika. - Montevideo
Ukuxoxisana nowaseBrazil, kunjani okuhlangenwe nakho kokushintshana? - I-Firenze - i-Italy
Kunjani isipiliyoni se-Exchange? Namuhla sizokulethela okuncane ukuthi isipiliyoni sokufunda phesheya sinjani. Ukwenza lokhu ngizothembela osizweni lukaThereza. Sahlangana lapho efika eBrasilia ukuzogubha usuku lokuzalwa kukadadewabo. Wabamba iqhaza ohlelweni lwe- “Science without Borders” futhi waba nokuhle…
Funda kabanzi Ukuxoxisana nowaseBrazil, kunjani okuhlangenwe nakho kokushintshana? - I-Firenze - i-Italy
Umbono kwesobunxele vs kwesobunxele, kungani cishe kungenzeki ukuchaza ukuthi uluphi uhlangothi?
Muva nje eBrazil sekube nenkulumo eningi ngempi ekucatshangwa ukuthi iyimpi, phakathi kwabantu abacabanga "ngendlela efanele" kakhulu ngabantu abacabanga ukuthi "kusele ngaphezulu". Kepha uyazi ukuthi asho ukuthini la magama? Ngaphambi kokuba siqale, ake sibone ukuthi la magama avela kuphi. Umsuka wesobunxele nakwesokudla.…
Funda kabanzi Umbono kwesobunxele vs kwesobunxele, kungani cishe kungenzeki ukuchaza ukuthi uluphi uhlangothi?
Ngabe ukuthenga eCiudad Del Este kuwufanele? - IParaguay
Hhayi bakithi, njengoba sihlukanisiwe, nginqume ukubuyekeza ezinye izithombe ezindala futhi phakathi kwazo ngithole olunye uhambo lwami lokuqala lokuya eParaguay. Futhi ngacabanga: Hawu, bakhuluma okuncane kakhulu ngeParaguay, kungani ngingeke ngikhulume kancane ngayo? Nanku umphumela. Ukuphi? IParaguay iseNingizimu Melika ...
Funda kabanzi Ngabe ukuthenga eCiudad Del Este kuwufanele? - IParaguay
Ukuqhuma - iBrasilia - iBrazil
Kukhona abangu-10.114 abafile ngo-09/05/2020 (futhi bayakhuphuka), lokhu kungenxa ye-COVID-19 kuphela. Ngabe ijika lesisulu lenyukele ngokwanele kulabo abafuna ukubona ukuphakama kwejika? Wonga kanjani umnotho ngabasebenzi abangasekho? Ubakhanga kanjani abatshalizimali bangaphandle uma ufuna ukuhlanganisa isithombe sabo nokufa? Ba…
Funda kabanzi Ukuqhuma - iBrasilia - iBrazil
Uhambo lwezinsuku ezintathu lwe-Bariloche - Argentina
Uhambo lwezinsuku ezi-3 lweBariloche - i-Argentina Futhi kulesi sikhathi sokuhlukaniswa akusekho okungcono kunokuthatha i-albhamu yakudala bese ubheka izithombe. Okungibuyisele ohambweni lwami lokuqala lokuya eBariloche, oluse-Argentina. Ngahlala izinsuku ezintathu kuphela edolobheni, futhi ngakwazi ukubamba iziteshi ezimbili. Ilanga neqhwa. FUTHI…
Funda kabanzi Uhambo lwezinsuku ezintathu lwe-Bariloche - Argentina
AmaMaya kanye nesibikezelo sokuphela komhlaba - iMexico
Yini amaMaya angasifundisa yona ngokuphela komhlaba? Esikhathini esithile esidlule, ngo-2012, abantu abaningi bezwa ngokuphela komhlaba. Futhi okuningi okuyimfihlakalo kwaphakanyiswa ezungeze impucuko yamaMaya. Ngemuva kwakho konke, amahlebezi athi ngokwekhalenda leMayan, umhlaba uzophela ngo…
Funda kabanzi AmaMaya kanye nesibikezelo sokuphela komhlaba - iMexico
IPilanesberg Park - i-photo safari nezifundo zezilwane - iNingizimu Afrika
Sanibona bafana, lokhu okuthunyelwe kuzoba ukuxuba kwamathiphu nokuziphatha kwezilwane engikufunde ohambweni lwami lokuqala lokuya eNingizimu Afrika.Amathiphu eKruger Park Abantu abaningi abacabanga ukuya eNingizimu Afrika, noma abake baba khona bacabanga ukwenza i-safari drive yezithombe. THE…
Funda kabanzi IPilanesberg Park - i-photo safari nezifundo zezilwane - iNingizimu Afrika
Sixoxisane nowesifazane waseMexico futhi waletha izincomo namathiphu eCoronavirus neMexico
Saxoxisana nowesifazane waseMexico futhi saletha izincomo ngeCorona Virus kanye namathiphu ngeMexico! Ngahlangana no-rika ngesikhathi sedina eRio de Janeiro. Futhi wajoyina iqembu lethu lokuvakasha futhi sahlanganyela etafuleni elifanayo. U-rika wayefuna ukwazi ukuthi itafula lethu lalivela kwamanye amazwe kanjani. Sasinabantu ...
Funda kabanzi Sixoxisane nowesifazane waseMexico futhi waletha izincomo namathiphu eCoronavirus neMexico
Kungenzeka kanjani ukuthi ube nezithuthi zomphakathi zamahhala? - I-Estonia - iTallinn
Ohambweni lwethu lokuqala lokuya eTallinn, inhlokodolobha yase-Estonia, lapho sifika esikhumulweni sezindiza samanye amazwe samangazwa yisikhumulo sezindiza esingajwayelekile. Empeleni ukuthi kwakubukeka kanjani ukuthi yayiklanyelwe ukuba ibe ngesinye sezikhumulo zezindiza ezipholile nesimnandi kunazo zonke ukuba kuzo. Ngiyavuma ukuthi ohambweni lwami zimbalwa izikhumulo zezindiza ezibonakala zikhona…
Funda kabanzi Kungenzeka kanjani ukuthi ube nezithuthi zomphakathi zamahhala? - I-Estonia - iTallinn
Izivakashi zaseGaborone - eBotswana
Okufanele ngikwenze eGaborone - eBotswana Ohambweni lwami lokuqala lokuya e-Afrika nginqume ukuwela umngcele ophakathi kweNingizimu Afrika neBotswana. Phela iBrazil iqhelelene kancane nezwekazi lase-Afrika. Ngakho-ke kubonakale kuwumqondo omuhle ukuwela umngcele ubone ukuthi iBotswana ibukeka kanjani…
Funda kabanzi Izivakashi zaseGaborone - eBotswana
Singayinqoba kanjani impi yezwe yesithathu? Impendulo ingaba lapho kuwe.
Ungayinqoba kanjani iMpi Yezwe Yesithathu ngenqwaba yabavakashi?
Funda kabanzi Singayinqoba kanjani impi yezwe yesithathu? Impendulo ingaba lapho kuwe.
ENingizimu Afrika Ukuxoxisana nomuntu waseNingizimu Afrika. Futhi kube noshintsho olungalindelekanga phakathi kwenhlolokhono.
Ngaphambi kokuba ngiqale, kufanele ngithi le ngxoxo yenziwe ngokuphelele. Sasingenaso isikhathi sokucabanga ngesikripthi futhi senziwa kuphela ngamandla. Ngokwesiphakamiso sikaLexiegh uqobo. Wayefuna okuthile okuyiqiniso! Indlela engcono yokufeza lokhu kungaba ukukwenza kanjena, usebenzisa umakhalekhukhwini ukuqopha futhi…
Funda kabanzi ENingizimu Afrika Ukuxoxisana nomuntu waseNingizimu Afrika. Futhi kube noshintsho olungalindelekanga phakathi kwenhlolokhono.
Ngabe i-Knights Templar Ikhona?
Indaba enhle evela ezwenikazi lakudala.
Funda kabanzi Ngabe i-Knights Templar Ikhona?
Yini ongayivakashela eRiga? IDolobha elihlanganisa izakhiwo ezintsha nezindala - iLatvia
Ngaphambi kokuthi ngikhulume ngeRiga uqobo, kungani ngigcine lapho? Ngesifiso sokuhambela wonke amazwe omhlaba, noma okungenani iningi lawo, iLatvia yayiphakathi nomgwaqo, futhi maphakathi nomgwaqo kwakuneLatvia. Phakathi kwe-Estonia neLithuania.😎 Ngimangele ukudlula kwe-…
Funda kabanzi Yini ongayivakashela eRiga? IDolobha elihlanganisa izakhiwo ezintsha nezindala - iLatvia
1- Kungani ngincoma iBanco Inter? Uma udinga i-akhawunti yokuhlola yaseBrazil, nganoma yisiphi isizathu, noma ngabe kungenxa yokuthi uhlala lapha eBrazil, noma ngenxa yomsebenzi, noma ukuza ukuzofunda, noma kungenxa yezokuvakasha, noma ukuthumela noma ukuthola imali evela phesheya isiphakamiso ukuthi…
Funda kabanzi I-Inter Bank
ILuxembourg - iGrand Duchy yokugcina yoMhlaba
ILuxembourg iyizwe elincane eYurophu, iFrance elingumakhelwane, iBelgium kanye neJalimane. Futhi kungani kukufanele ukuvakashelwa? Ngoba ungoGrand Duchy wokugcina emhlabeni. Futhi ungazibuza: yini iGrand Duchy? Impendulo elula: yizwe, okuthi esikhundleni sikamongameli okhethiwe, libe nenduna enkulu…
Funda kabanzi ILuxembourg - iGrand Duchy yokugcina yoMhlaba
Njengoba ngithembisile eposini lokugcina, ngizokhuluma ngezwekazi lesishiyagalombili. Likuphi izwekazi lesishiyagalombili? Ihlala phezu kwamakhanda ethu. Emkhathini, eMhlabeni Orbit! Ekufuneni izithombe zesathelayithi ukuze wazi ubukhulu bemililo eBrazil isiyonke. Lokho okungukuthi, kufaka phakathi ama-biomes ayisithupha amakhulu aseBrazil ...
Funda kabanzi Izwe Lesishiyagalombili
Kuthiwani uma ngikutshela ukuthi ngokwethu (abantu) umhlaba uzuze izwekazi lesikhombisa? Yebo, izindaba zibukeka zizinhle, kodwa ngeshwa akunjalo. Ngenxa kadoti onqwabelene olwandle oluhanjiswa yimisinga yolwandle futhi kugcina kugxunyekwe endaweni ethile oLwandlekazi iPacific phakathi kweCalifornia neHawaii ...
Funda kabanzi Izwekazi Lesikhombisa
Amathiphu wokuthi wenzeni e-Barcelona
I-Barcelona inhle kulabo abathanda ukwakheka okungavamile. Ama-façade nengaphakathi lezindawo zezivakashi ezibalwe ngezansi ziletha okungajwayelekile futhi okuphuma kusipiliyoni sesikwele kunoma yisiphi isivakashi. Uma lolu kuwuhambo lwakho lokuqala oluya eBarcelona, ​​landela lawa macebiso: 1 - Ulimi: Into yokuqala ozoyibona ...
Funda kabanzi Amathiphu wokuthi wenzeni e-Barcelona
Angazi ukuthi ngingaqala kanjani lokhu okuthunyelwe, ngakho-ke ngizokutshela ukuthi uthini umbono wakhe. Kuhlonishwa iNtat-Dame Cathedral, eyashiswa ngomhlaka-15 Ephreli 04. Kuyinto ethinte abantu abaningi, ngaphezu kwesiyaluyalu nosizi okulethwa yiqiniso. Kimi owayeya eFrance nabangani futhi…
Funda kabanzi Inkokhelo ku-Notre-Dame
Uzofika kanjani eParis?
Njengoba ngithembisile kokuthunyelwe kwangaphambilini, ngokuzayo lapho ngiyokhuluma ngeParis ngizokuphathela amathiphu lapha. (Okuthunyelwe lapho ngenza khona lesi sithembiso yilesi) Manje-ke sekuyisikhathi sokugcina isithembiso. Into yokuqala okufanele uyenze ukuchaza indawo yakho yokuqala ...
Funda kabanzi Uzofika kanjani eParis?
Ingabe izidakamizwa ze-caffeine ne-cocaine kufanele zivinjelwe?
Kokuthunyelwe kwangaphambilini senze ingxoxo nowesifazane wasePeruvia nesivakashi saseBrazil ngePeru. (Ungafinyelela le ngxoxo enhle ngokuchofoza lapha). Ngenxa yakhe nginqume ukuletha ilukuluku mayelana netiye le-coca yasePeru. Itiye leCoca Isifiso sokuqala ukuthi itiye le-coca liyiswa lapho ...
Funda kabanzi Ingabe izidakamizwa ze-caffeine ne-cocaine kufanele zivinjelwe?
Kungani amaFulentshi aphikisana nezinduku zabo lapho ukhuluma isiNgisi futhi lokhu kuhlangene ngani namaBrazil?
Namuhla sizokhuluma ngezilimi nokuthi kungani amaFrance embimbi amakhala uma sikhuluma isiNgisi nawo. Yebo, cishe bonke abantu engikhulume nabo ngeFrance, futhi abake baba lapho, bahlala bethi izinto ezimbili: Ukuthi kukhona indawo enhle, enhle. Futhi ukuthi amaFrance abimbi amakhala abo uma ...
Funda kabanzi Kungani amaFulentshi aphikisana nezinduku zabo lapho ukhuluma isiNgisi futhi lokhu kuhlangene ngani namaBrazil?
I-Niagara Falls vs Foz do Iguaçu Iyini i-waterfall engcono kakhulu?
Sanibona bafana kanti namhlanje sizokhuluma ngempophoma! Futhi ezimbili ezinkulu. Yikuphi okungcono: i-Niagara Falls noma i-Foz do Iguaçu? Futhi yikuphi okukhulu kakhulu phakathi kwabo? Ngaphambi kokuthi siqale ngithanda ukukubeka kucace ukuthi lokhu ukuqhathanisa okwenziwe nemininingwane esemthethweni engiyitholayo. Umbuzo wesibili uthi…
Funda kabanzi I-Niagara Falls vs Foz do Iguaçu Iyini i-waterfall engcono kakhulu?
I-volcano kanye nesimangaliso ekuqaleni kohambo lwaseChile
Lezi zinsuku nginomzwelo omncane, kungaba ngenxa yezehlakalo zakamuva, ezomuntu siqu, noma nabantu bomndeni wami. Le yimibuzo phakathi kokuxilongwa nezifo ezidinga ukholo lwethu oluningi. Futhi lokho kudinga ukusuka kuNkulunkulu. Ngakho-ke nginqume ukubhala ngesimangaliso ohambweni. Okuthile okwenzeke ngesikhathi…
Funda kabanzi I-volcano kanye nesimangaliso ekuqaleni kohambo lwaseChile
Indlela yokufaka ngaphandle kokufaka ironing
Sanibonani bafana, namuhla icebo elisheshayo okufanele laziwe yilowo nalowo ojosaka okokuqala ngqa. Uma ufaka zonke izingubo zakho kojosaka, ipotimende, noma imithwalo, imvamisa igcina isishwabene. Futhi uma uhambe kuphela nemithwalo yezandla noma njengokukhanya ngangokunokwenzeka, mhlawumbe awunansimbi ...
Funda kabanzi Indlela yokufaka ngaphandle kokufaka ironing
Yini ongayilindela ePhilippines? NgesiFilipino
Namuhla sizokwazi okwengeziwe ngaleli zwe - iqoqo leziqhingi elibizwa ngePhilippines. Siqale le ngxoxo ukuze sifunde okwengeziwe ngaleli zwe, okuyiziqhingi ezinhle zase-Asia. Futhi akekho ongcono ukusitshela okuncane ngaye ngaphandle komuntu wasePhilippines. Kungakho ngikhuluma namhlanje nomngani wami wasePhilippines - uJeff. Ngihlangane ...
Funda kabanzi Yini ongayilindela ePhilippines? NgesiFilipino
Okudingayo ukwazi ngeZigciwane
Lezi zindaba zisanda kwenzeka (29/01/2019) U-ANVISA usanda kusebenzisa iSitifiketi Sokugoma Somhlaba Wonke. Futhi kungani lezi zindaba ezimnandi kuwena mhambi? Ngoba manje usungakhipha iSitifiketi Sakho Somhlaba Sokugoma kanye neProphylaxis - i-CIVP - ekhaya! (Kuphakathi emsebenzini, noma ohambweni, unquma.…
Funda kabanzi Okudingayo ukwazi ngeZigciwane
Amathiphu ku-Gramado - Brasil
Namuhla sizokhuluma ngaleli dolobha elihle eliseningizimu yeBrazil. Ungayithola kanjani? IGramado icishe ibe ngamakhilomitha ayi-120 ukusuka ePorto Alegre, inhlokodolobha yaseRio Grande do Sul. Futhi ngeshwa idolobha alinaso isikhumulo sezindiza… Ukufika lapho ungaya ngendiza ePorto Alegre (POA) bese usuka lapho ngebhasi (R $ 32,00 usuka esikhumulweni ...
Funda kabanzi Amathiphu ku-Gramado - Brasil
ESingapore kanye nezimfihlo ezivela ngemuva kwe-dollar ye-500
Yebo, uma ulandela le bhulogi, usuvele uyazi ukuthi ungafika kanjani eMarina Bay Sands, Ukukhumbula okuthunyelwe kulapha: https: //1aviagem.com / singapore-on-exhibitions-and-the-marina-bay-sands / Kepha, kunjalo, kusekuningi okusele mayelana naleli zwe. Ngakho-ke, lokhu okuthunyelwe kuyahambisana nokwedlule, kunamakhasethi amaningi, amathiphu nezindawo ongazivakashela. I-Trivia: Into yokuqala ongayenzi…
Funda kabanzi ESingapore kanye nezimfihlo ezivela ngemuva kwe-dollar ye-500